कसरी सुरु भयो अप्रिल फुल मनाउने चलन?
अप्रिल फुल कहिलेबाट सुरु भयो र कसले मनाउन सुरु गरेका थिए ? यो विषयमा तपाईलाई प्रश्न उब्जेको होला । अप्रिल महिनाको पहिलो दिन मान्छेहरुलाई मुर्ख बनाउने चलन रोम र सेल्टबाट भेर्निज युकिनक्सको समयबाटै सुरु भएको मानिन्छ ।
छिमेकी भारतमा पनि मान्छेलाई मुर्ख बनाउने खास पर्वहरु छन् । फ्रेन्चहरु अप्रिल फस्टकै दिन मान्छेहरुलाई मुर्ख बनाउँछन् । तर उनीहरु अप्रिल फिस भनेर यो दिनलाई रोचक ढंगले मनाउँछन् । तर अप्रिल फुलमा गम्भिर प्रकारका ठट्यौली गरिन्न । यो दिन अरुलाई आतंकित पार्ने र धेरै कष्ट र पिडा दिने खालका झुटको चलन कहिँ पनि छैन ।
बिबिसी टेलिभिजनले सन् १९५७ अप्रिल प्रथमका दिन स्विजरल्याण्डमा स्पागेटीको खेती नामक भ्रामक समाचार बनाएर दुनियाँलाई उल्लु बनायो । वास्तवमा मैदाको पिठोबाट बनाइने चाउमिन जस्तै रेसादार खाने कुराको नाम हो, स्पागेटी ।
बेलायतमा स्पागेटीलाई आजका दिनमा पनि उच्चस्तरको भोजन मानिन्छ । संसारका अरु भागमा जस्तै बेलायतमा यो दिन विहानै मान्छेलाई ढाँटिन्छ र जो ढाँटिन्छ, त्यसलाई ‘अप्रिल फुल’ भनेर चिच्याएर उल्लु पार्ने काम हुन्छ तर जसले दिउँसो ढाँट्ने प्रयास गर्छ, त्यसलाई नै ‘फुल’ ठानिन्छ ।
अप्रिल फस्टमा मात्र होइन, संसारका विभिन्न देश जस्तै भारत, इरान, पोल्याण्ड र अर्जेन्टिना र ब्राजिलजस्ता देशमा पनि ‘मुर्ख बनाएर’ रमाइलो गर्ने चलन छ । अप्रिल फस्टका दिन ‘अस्ट्रेलियाको हार्बर पुल’ बेच्ने भन्दै कतिपयलाई मुर्ख बनाइने पनि गरेको छ ।